Qoraallada Grace Carter ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Grace Carter
Grace Carter waa qoraa dhanka tiknoolajiyadda ah Waxbarasho iyo Caawinta Australia adeegyada. Waxay ka shaqeysaa hagaajinta beddelaadda waxayna horumarisaa xeeladaha suuqgeynta. Sidoo kale, Grace waa aqoonyahan wax ka barta Caawinta Meelaynta Cilmi-nafsiga websaydhka tacliinta.
Khamiis, Juun 19, 2018 Arbaco, Juun 18, 2018 Grace Carter
Abuuritaanka waxyaabaha dadku u arkeen inay yihiin kuwo xiiso leh oo la xiriira, waxaad sare u qaadi kartaa muuqaalka boggaaga natiijooyinka raadinta Google. Sameynta taasi waxay kaa caawin doontaa inaad dejiso beddelaadyada qaarkood. Laakiin kaliya inaad dadka u fiirsato alaabadaada kuma damaanad qaadayaan inay tallaabo qaadayaan oo ay ku siinayaan beddelaad. Raac toddobada tilmaamood ee ecommerce si aad u abuurto waxyaabaha beddelaya. Baro Macmiilkaaga Si aad u abuurto waxyaabo beddela waxaad u baahan doontaa inaad aragti fiican ka haysato waxa aad tahay